Madaxweynaha Maamulka Jubaland oo lagu soo dhaweeyay Garoowe “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Maamulka Jubaland oo lagu soo dhaweeyay Garoowe “SAWIRRO”
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo mas’uuliyiin kale oo ka tiran Puntland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyey Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wefdi balaaran uu hogaaminayay.
Shir jaraa’id oo ay si wada jir ah saxaafadda ugu qabteen Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Axmed Maxamed Islaam ayay kaga hadleen waxyaabaha uu kulankooda ku saabsanyahay, iyadoo Dr Cabdiweli Gaas uu xusay in ay aad ugu faraxsanyihiin booqashada uu Madaxweynaha Maamulka Jubba ku tegay Garoowe.
”Waxaa sharaf weyn noo ah in maanta Mudane Axmed Maxamed Islaam noogu yimi booqasho gaaban , booqashadiisuna waxaa weeye xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Puntland iyo Jubbaland, waxaa kale oo muhiim ah in laga wada tashado oo dawladaha Federaalka ka tirsani ay kawada hadlaan geedi socodka nabadda Soomaaliya” ayuu yiri Dr Gaas.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa dhankiisa Puntland uga mahadceliyey soo dhaweynta balaaran ee loo sameeyey.
”Socodkaygu waxa uu ahaa bal inaan wadatashigii joogtada ahaa layeesho, laysna weydiiyo bal maanta xaaladda Soomaaliya meesha ay marayso, iyadoo cidkale aan dhib loo geysaneyn bal Soomaali masiirkeeda meesha uu ku dambeyn doono in lays waydiiyo “ ayuu yiri Axmed Madoobe.
Siminaar ku saabsan wacyigelinta caafimaadka bulshada oo lagu qabtay Gaalkacyo